Ny alahady 5 jolay 2020 izao ny Fetim-bokatra 2020 – FJKM Ambavahadimitafo Ny alahady 5 jolay 2020 izao ny Fetim-bokatra 2020 |
Ny alahady 5 jolay 2020 izao ny Fetim-bokatra 2020
Publié le 19 juin 2020 à 06:06
« Ary toy izany koa ianareo ; raha fatra-paniry ny zava-panahy , dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. » (I Kor 14 12)
Ho antsika mpianakavy amin’ny finoana eto Ambavahadimitafo sy ireo zanaka ampielezana rehetra.
Ry havana, ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa.
Araka ny efa fantatsika dia amin’ny alahady 5 jolay 2020 izao ny Fetim-bokatra eto amintsika Ambavahadimitafo :
– Fotoana hitondrana am-bavaka ireo asan’Andriamanitra sahanin’ny Fiangonana.
– Fotoana ihany koa hiaonantsika nobeazina sy nandalo teto amin’ny Fiangonana, fa fotoana ihany koa hamoriana vola ho enti-manatanteraka ireo asan’ny Tompo (Anatiny sy ivelany) koa ny vinantsika miaraka amin’ny Tompo amin’ity taona ity dia 16.000.000Ar.
Koa manentana antsika rehetra, fa indrindra ianareo Zanaka Ampielezana mba ho tonga hiara-mivavaka sy hifanome tànana amin’ny asan’ny Tompo.
Fanaontsika ny manao « Tonona » ho fanomanana izany Fetim-bokatra izany izay azontsika arotsaka amin’ny fomba mahazatra sy aty am-piangonana.
Misaotra ny Tompo isika fa amin’ny anjarantsika Fiangonana amin’ny trano fidiovana 39.000.000Ar dia 10.000.000Ar sisa no miandry antsika (efa eo an-tànana ankehitriny ny 2.000.000Ar). Ny ezaka sisa arak’izany dia 8.000.000Ar, koa manentana antsika samy handray anjara
Ny Tompo Jesoa anie hamaly fitia. Mirary ny fiadanana’Andriamanitra ho amintska rehetra anie ry havana.